Reflow Alxanka - Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Dib-u-cusbooneysiinta 'Reflow Soldering' waa geedi socod muhiim ah oo lagu helo tayo wanaagsan oo wax lagu iibiyo. Mashiinka alxanka lagu shubo ee Fumax wuxuu leeyahay 10 kuleyl. aagga. Waxaan ku hagaajinaynaa kuleylka. maalin kasta si loo hubiyo jawiga saxda ah.
Reflow soldering waxaa loola jeedaa in la xakameeyo kuleylka si loo dhalaaliyo alxanka si loo gaaro isku xirnaasho joogto ah oo u dhexeeya qaybaha elektiroonigga iyo guddiga wareegga. Waxaa jira habab kuleylineed oo kaladuwan oo lagu iibiyo, sida foornooyinka dib-u-cusboonaysiinta, laambadaha kululaynta infrared ama qoryaha hawo kulul.
Sanadihii la soo dhaafay, iyada oo la horumarinayo alaabada elektarooniga ah jihada cabirkeedu yar yahay, miisaanka fudud iyo cufnaanta sare, dib u sii iibinta qashinka waa inay wajahdaa caqabado waaweyn Reflow soldering ayaa loo baahan yahay si loo qaato habab kala gadisan oo kuleyl badan si loo gaaro keydinta tamarta, lebiska heerkulka, kuna habboon shuruudaha sii kordhaya ee sii kordhaya ee alaabeynta.
（1 gra Wejigiisa heer kul kulleed ballaaran, fududahay in la xakameeyo qalooca heerkulka.
2 paste Jinka Alxan ayaa loo qaybin karaa si sax ah, iyada oo waqtiyada kululeynta ay yar yihiin iyo suurtagalnimada in lagu qaso wasakhda.
（3） Ku habboon in la iibiyo dhammaan noocyada saxnaanta sare iyo qaybaha baahida sare leh.
（4 process Nidaam fudud oo tayo sarreysa.
2. Diyaarinta wax soo saarka
Marka hore, Jinka Alxan waxaa si sax ah loogu daabacaa sabuurad kasta iyada oo loo marayo caaryada ku dhejisan Alxan.
Marka labaad, qaybta waxaa lagu dhejiyaa loox mashiinka SMT.
Kaliya ka dib marka diyaargarowgaani si buuxda loo diyaariyo, ayaa dib u bixinta dhabarka dhabta ah ay bilaabataa.
Reflow soldering wuxuu ku habboon yahay SMT, wuxuuna la shaqeeyaa mashiinka SMT. Marka qaybaha ku lifaaqan yihiin guddiga wareegga, alxamiddu waxay u baahan tahay in lagu dhammaystiro kuleylka dib u celinta.
4. Awooddeenna: 4 Sets
Summad ： JTTEA 10000 / AS-1000-1 / SALAMANDER
（1 ering Dib-u-cusbooneysiinta dib-u-cusbooneysiinta waxaa badanaa loo isticmaalaa qaybaha qaybaha; Alxanka Mashiinka badiyaa waxaa loogu talagalay dhajinta fiilooyinka.
（Dib-u-hagaajinta mar hore waxay alxan ku leedahay foornada horteeda, oo kaliya xabagta alxanka ayaa lagu dhalaaliyaa foornada si ay u sameysmaan isku-dheji; Alxamida wave waxaa lagu sameeyaa bilaa foornada horteeda, waxaana lagu sii dhejiyaa foornada.
（3） Dib-u-cusbooneysiinta: foomamka hawo heerkulka sare ee dib u sii iibinta qaybaha; Wareejinta Mowjadaha: Foornooyinka wax lagu shubay ee foomamka ayaa loo ruxruxaa qaybo.